အသိသတိ - ဖ
ဖ အက္ခရာစဉ်ထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဖဦးထုပ် အက္ခရာခေါင်းစဉ်နဲ့ နာမည်များ
- မိမိစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစကို လူဖြစ်ခွင့်ရတုန်း လူဖြစ်ကျိုးနပ်အောင် လုပ်ပြပြီး ချန်ထားခဲ့ချင်တဲ့ ဖြစ်ချင်မှုနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ ကြိုးစားမှု။ မိုးရွာတုန်း ရေခံထားမှ ရတုန်းလေး ရသလောက် ယူထားမှဆိုပြီး အောက်ခြေက သံချေးပေါက်နဲ့ စည်ပိုင်းကို ရေခံမိရင်တော့ မိုးရွာတဲ့ အချိန်ကာလကုန်ရင် ရေတစ်စက်မှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို ဖြစ်ချင်လို့ ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ဖြစ်ပြီးမှ ပြုတ်ကျကုန်တာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲ? ကျဆုံးသွားစေတဲ့ ဖြစ်ချင်မှုက ကြိုတင်ပြင်ဆင် တွက်ဆချင့်ချိန်သုံးသပ်တဲ့ အသိဉာဏ်တွေ မပါဘူး။ ကဲ! ဘယ်လိုဖြစ်ချင်မှုကို ရွေးမှာလဲ?
- ဖြစ်တယ်၊ တည်တယ်၊ ပျက်တယ်။ ဖြစ်တည်ပျက်ဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပဲ။ ဖြစ်နေကျအတိုင်း အာရုံခြောက်ပါးကြောင့် စိတ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်တယ်၊ တည်တယ်၊ ပျက်တယ်။ အရာရာဟာ ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းပျက်တာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပဲ။ အဲဒီ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေကျအတိုင်း ဖြစ်ပြီးပျက်နေတာကို ဖြစ်ပျက်သိတဲ့ စိတ်နဲ့ စောင့်ကြည့်သိမှတ်နေရမှာ။
- စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်သိမှတ်နေတဲ့ သိမှုအားကောင်းလာရင် စိတ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်ရုံလေးဖြစ်တာ၊ ခဏလေး။ ဒါသဘာဝပဲလို့ သိနိုင်လာတယ်။ သိမှတ်တယ်ဆိုတာကလည်း အဲဒီဖြစ်ရုံလေး ဖြစ်ပြီး ပျက်ပြသွားတဲ့ စိတ်သဘာဝ သဘောကို သိရုံလေးပဲ သိပေးတာ။ (မဖြစ်သင့်တဲ့ စိတ်တစ်ခုက ဖြစ်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လုလုလေး လာချောင်းနေရင်လည်း အဖြစ်မခံဘဲ မောင်းထုတ်နိုင်ရမယ်။)
- စိတ်ထဲဝင်လာသမျှ အာရုံပေါင်းစုံကို လက်ခံပြီး ခံစားမှုတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြစ်ပြနေတာ စိတ်ရဲ့နဂိုမူလ စိတ်သဘာဝပဲ။ အဲဒီလို ဖြစ်လွယ်တတ်တဲ့ စိတ်ကို သိစရာမှန်သမျှအားလုံး သိလို့ရအောင် သိပေးတဲ့ စိတ်အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်ရင် လက်ခံတာ လွယ်ကူခဲ့တုန်းကလို သိစရာကို သိပေးတဲ့အခါမှာလည်း လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြစ်လွယ်စိတ် ဖြစ်ပေးနိုင်မှာပဲ။
- လိုနေတာကို ဖြည့်စွက်ပေးတာ၊ ကွက်လပ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ အစားထိုးဖြည့်ပေးတာ၊ စိတ်ကိုစောင့်ကြည့် သိမှတ်တဲ့နေရာမှာ စိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်တည်ပျက်နေသလို သိမှတ်နေတဲ့ အသိကလည်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်သိပေးနေရတယ်။ သိပြီးတဲ့အခါမှာလည်း သိစရာရော၊ သိနေတာရော၊ သိမှန်းသိနေတဲ့ အသိတွေပါ တစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူး။ သိစရာရှိတာကို ဆက်တိုက်သိလို့ရအောင် မရှိတော့တဲ့နေရာတွေမှာ၊ အသိတွေ ထပ်ဆင့် ဖြည့်တင်းပေးရမယ်။ သိမှတ်မှုတွေ၊ အဆက်မပြတ်အောင် ဖြည့်ကျင့်ပေးတာ၊ ဖြည့်စွမ်းပေးတာ၊ ဖြည့်တင်းပေးတာ၊ ဖြည့်ဆည်းပေးတာဟာ စိတ်အသိရဲ့ စွမ်းအားကောင်းလို့ လုပ်နိုင်နေတာပဲ။
- လိုချင်တပ်မက်တဲ့စိတ်တွေ လွန်ကဲပြင်းထန်လာရင် အရှက်တရားဆိုတာ မရှိတော့ဘဲ လူလစ်ရင် လစ်သလို ကြားက ဖြတ်ခုတ်ပြီး အနိုင်ကျင့် လုယူလိုက်တဲ့ ဓားပြလိုစိတ်မျိုး။